राष्ट्र संघका लागि नेपाली राजदूत भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सरकारले समय समेत दिएको छ । बैठकले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय […]
दुईवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा छोरी र उनका बुबाको मृत्यु
काठमाडौं । चुच्चेपाटीमा दुईवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा चार वर्षिया छोरी र उनका बुबाको ज्यान गएको छ । बा ५७ प ५७०५ मोटरसाइकल र बा ९० प ३२८३ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा चुच्चेपाटीका कुमार श्रेष्ठ र उनकी ४ वर्षकी छोरी रियाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा घाइते एकजनाको ओम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । […]
निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माइतीघर लगायत उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ। सर्वाेच्चले असार २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै उक्त मितिसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नर्गन आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएकाहरुलाई धरपकड नर्गन पनि अादेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश […]
(नेकपा ) भित्रै बिवाद चर्कियो
काठमाडौ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल र दुई तीहाई बढी बहुमतको सरकार रहेपनि मन्त्रिहरुको काम प्रति पार्टी पंङती असन्तुष्ट देखिएको हो । मन्त्रीहरुको काम, उनीहरुको प्रतिक्रिया र व्यवहारका आधारमा मुल्याङकन गरि काम कारबाहि चुस्त बनाउन नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वलाई […]
भक्तपुर । राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाउनु भएको छ । रफत सञ्चार क्लबले बिहीबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै राणाले संसदमा गृहमन्त्रीले डाक्टर गोबिन्द के.सी.प्रति दिएको अभिब्यक्तिले सरकारको अधिनायकबादी चरित्र प्रष्टिएको बताउनु भयो । उहाँले जनताको पक्षमा लडिरहेको के.सी. अधिनाकबादी हुने र […]
डा गोविन्द केसी आइसियुमा
काठमाडौं । जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीको अवस्था गम्भिर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य गम्भिर भएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्दै डा केसीलाई अस्पताल पुर्‍याएका छन्। डा केसीलाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा राखिएको छ। अनसन बसिरहेका डा केसी अर्धचेत भएपछि डाक्टरहरुको टोलीले जबरजस्ती आइसियुमा लगेका हुन्। आइयिसुमा डा केसीको उपचार भइरहेको छ। डा केसीको […]
सरकारी निर्णय लोकतन्त्र विपरित– डा. भट्टराई
काठमाडौँ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त र नीति विपरीतका क्रियाकलाप गर्न सरकार उद्धत भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय मागेर आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भट्टराईले उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा गर्न नपाउने निर्णय गरेर सरकारले लोकतन्त्र, समाजवाद र साम्यवादको सिद्धान्त र नीतिविपरित अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो […]
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा खसेको पहिरो हटाइयो, बाटो दुईतर्फी खुल्यो
कृष्ण अाचार्य । चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा खसेका दुई ठूला पहिरो हटाईएसंगै अवरुद्ध बनेकोको सडक संचालनमा आएको छ । आज अपरान्ह ४ः३५ बजेदेखी नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुई तर्फी संचालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । यसअघि दिउँसो टोपेखोला र कालीखोलाको बीच भागमा फसेका सवारी साधनहरुलाई एकतर्फी बाटो खुलाई सुरक्षित स्थानमा पठाईएको थियो । […]
राष्ट्रियसभा बैठकमा काँग्रेसको अवरोध
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठक प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । विशेष समयमा बोल्ने क्रममा काँग्रेसकातर्फबाट राष्ट्रियसभा दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा काँग्रेस सांसद पाण्डेले बोल्दै अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन […]